DIG सिलवालको मुद्दाबारे आज सर्वोच्चमा के भयो त्यस्तो ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
DIG सिलवालको मुद्दाबारे आज सर्वोच्चमा के भयो त्यस्तो ?
काठमाडौं : डिआईजी नवराज सिलवालले प्रकाश अर्याललाई आईजिपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेर आफूलाई आईजिपी बनाउन माग गर्दै दायर गरेको टिर उपर आज पनि सुनुवाई नहुने भएको छ । यसअघि जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा पनि अदालत पुगेका सिलवाल लाई नै आईजिपी बनाउन सर्वोच्च अदातलको वृहत पुर्ण ईजलाशले परमादेश दिएको थियो ।
२०७३ चैत २८ गते सरकारले प्रकाश आर्याललाई आईजिपी नियुक्त गरेसँगै सिलवालले दायर गरेको रिटको साप्ताहिक पेशी बिहीबार तोकिएको भएपनि सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थगित गरेको हो । सर्वोच्चले त्यस्तो परमादेश दिएपनि कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा प्रकाश अर्याल अगाडी देखिएको भन्दै सरकारले अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला डिआईजी सिलवाल पक्राउ पर्नेदेखि प्रधान न्यायाधिश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुनेसम्मको घटना विकसित भएसँगै सिलवालको मुद्दा करिव ओझेलमा परेको छ । रातोपाटीमा समाचार छ । महाभियोग दर्ता भएपनि अदालतको आदेशले पुन पदमा फर्किएकी प्रधान न्यायाधिश कार्कीले बिहीबार सिलवाल मुद्धा अगाडी बढाउने अनुमान गरिएपनि पेशी स्थगीत भएसँगै यो मुद्धा ओझेलमा परेको बताईएको छ ।